Ciidamada Qaramada Midoobey oo loogu baaqay in ay is difaacaan | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Ciidamada Qaramada Midoobey oo loogu baaqay in ay is difaacaan
Ciidamada Qaramada Midoobey oo loogu baaqay in ay is difaacaan
Ciidamada nabad ilaalinta Qaramada Midoobey ee ka howlgalaya qaar ka mid ah goobaha adduunka ugu khatarta badan ee dagaaladu ay ragaadiyeen ayaa loogu baaqay in ay diyaar u noqdaan isla markaana ay awood u yeeshaan in ay awood isticmaalaan si ay isu difaacaan haddii ay halis dareemaan.
Warbixin cusub oo loo gudbiyay xoghayaha guud ee Qaramada midoobey ayaa lagu sheegay in 56 ka mid ah ciidamada Qaramada Midoobay la dilay sanadkii aynu soo dhaafnay.
Tan iyo sanadkii 2013, 195 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ayaa ku dhintay weerarro lagu soo qaaday.
Tiradaasi dhimashada ayaa ah tii ugu badneyd abid ee Qaramada Midoobay soo marta muddo intaa dhan.
Warbixintan oo ay diyaariyeen khubaro dhanka ammaanka ah ayaa lagu sheegay in hadda la joogo xilligii ay nabad ilaaliyayaasha Qaramada Midoobay ka hortagi lahaayeen weerarrada ka dhanka ah.
Khubarada ayaa ku doodaya in calanka Qaramada Midoobay aan sidii hore loo xurmeyn, askarta nabad ilaalintana looga baahan yahay inay ka hortagaan khatarta kusoo wajahan ayagoo adeegsana awood haddii loo baahdo.
Howlgallada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ay ka waddo qaaradda Afrika ayaa ah kuwa ugu dhimashada badan, warbixintuna waxa ay sheegaysaa in khasaarahaasi laga hortagi karo haddii ciidamada la siiyo tababar ku filan ka hor inta aan loo dirin nabad ilaalinta